Iindaba - iLinqing Xinri Precision Bearing Co, Ltd
I-Linqing Xinri Precision Bearing Co, Ltd
Isicwangciso searhente yokuthwala iXRL 2021
Ngemizamo edibeneyo yabo bonke abathengisi be-XRL, sele sithumele kumazwe angama-120 kwihlabathi liphela njenge: Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia, South Korea, Pakistan, Algeria, Saudi Arabia, Egypt, Turkey, Iraq, Israel, Australia, New Zealand, Netherlands, Belgium, Norway, Bulgaria, Armenia, Estonia, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Peru, Bolivia, Chile, Nicaragua, Guatemala, Kenya, Zambia, Nigeria, United States, Canada, Mexico kunye neMexico. Njl ... abanye babo bacele inkonzo ye-OEM, iibheringi ezinamagama, kodwa abathengi bayanda bacela i-XRL uphawu namhlanje, kwaye zisetyenziselwa uphawu lwe-XRL ukufaka iNTN, KOYO, SKF, TIMKEN njlnjl. Ixabiso elifanelekileyo kunye neebheringi ezisemgangathweni, ibe uninzi lukhetho lomthengi. Kwaye abantu abaninzi bayayazi i-XRL yohlobo. Siyayazi impumelelo ye-XRL kufuneka ibulele kwimizamo yokuthengisa kunye nentengiso yomthengi wentengiso wasekhaya. Ukukhusela inzuzo yomthengi wentengiso yendawo yethu kwaye sinokubangcono ukulawula nokuthengisa iibheringi zeXRL. sicwangciselwe ukumisela iarhente kwintengiso yasekhaya.
Kuyo yonke iarhente yethu yokuthwala i-XRL, Siza kubonelela ngenkxaso enkulu:
Siza kwenza isipho sentengiso esifana neT-shirt, ipeni, okanye iibhena ezisimahla.
Kwaye sikwanika eyona nkonzo ibalaseleyo ngaphambi nasemva kokuthengisa.
Kwimarike yasekhaya, sinokubonelela ngenkxaso yobuchwephesha kwiinjineli zethu.
Ngaphezulu, siza kunika ukukhusela kwintengiso kuyo yonke iarhente yethu. Nje ukuba ube yiarhente yethu kwintengiso yasekhaya, yonke imibuzo evela kwintengiso yakho, siya kubuyisela umthengi kuwe. Kwaye unokunxibelelana kwaye uthengise ngokuthe ngqo.
Ngoku wakuba unomdla wokuba ngummeli we-XRL, wamkelekile ukuba unxibelelane nathi ngokukhululekileyo!